विश्वकपमा अब चार बाँकी : बेल्जियम वा क्रोएसियाले तारा पाउलान् कि फ्रान्स वा इंग्ल्यान्डले तारा थप्लान्? – MySansar
विश्वकपमा अब चार बाँकी : बेल्जियम वा क्रोएसियाले तारा पाउलान् कि फ्रान्स वा इंग्ल्यान्डले तारा थप्लान्?
Posted on July 8, 2018 by Salokya
रसियामा जारी विश्वकप २०१८ मा अब अन्तिम चार वटा टिम बाँकी भएका छन्। फ्रान्स, बेल्जियम, क्रोएसिया र इंग्ल्यान्ड। यी मध्ये फ्रान्स र इंग्ल्यान्डले एक पटक विश्वकप जितिसकेको भएर उनीहरुको जर्सीमा एक तारा पहिले नै छ। यस पटक दुईमध्ये एकले विश्वकप जिते तारा थप्न पाउने छन्। बेल्जियम र क्रोएसियाले भने अहिलेसम्म विश्वकप जितेका छैनन्। त्यसैले उनीहरु ताराविहीन छन्। यी चारमध्ये एक टिमले विश्वकप जित्नेछ तर त्यसका लागि दुई वटा खेल जित्नुपर्नेछ- सेमिफाइनल र फाइनल।
अब विश्वकपमा आइतबार र सोमबार विदा छ। मंगलबार पहिलो सेमिफाइनल हुनेछ फ्रान्स र बेल्जियमबीच। बुधबार अर्को सेमिफाइनल हुनेछ क्रोएसिया र इंग्ल्यान्डबीच।
फ्रान्सले राउन्ड अफ १६ मा अर्जेन्टिनालाई ४-३ ले र क्वार्टरफाइनलमा उरुग्वेलाई २-० ले हराएको हो। बेल्जियमले भने राउन्ड अफ १६ मा जापानलाई ३-२ ले र क्वार्टरफाइनलमा ब्राजिललाई २-१ ले हराएको हो।
अर्कोतर्फ क्रोएसियाले डेनमार्कलाई पेनाल्टी सुटआउटबाट राउन्ड अफ १६ मा र आयोजक रसियालाई पनि पेनाल्टी सुटआउटबाटै क्वार्टरफाइनलमा हराएको हो। इंग्ल्यान्डले भने कोलम्बियालाई राउन्ड अफ १६ मा पेनाल्टी सुटआउटबाट र क्वार्टरफाइनलमा स्विडेनलाई २-० ले हराएको हो।
2 thoughts on “विश्वकपमा अब चार बाँकी : बेल्जियम वा क्रोएसियाले तारा पाउलान् कि फ्रान्स वा इंग्ल्यान्डले तारा थप्लान्?”